RASMI: Aston Villa oo dib ugu soo laabtay horyaalka Premier League kaddib markii ay garaacday kooxda uu tago Frank Lampard – Gool FM
(London) 27 Maajo 2019. Kooda kubadda cagta Aston Villa ayaa dib ugu soo laabtay horyaalka Premier League, waxaana la soo dalacsiiyey kaddib markii ay 2-1 uga adkaadeen naadiga Derby County.
Kulankan ayaa waxa uu ahaa finalka kala baxa ee horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska, waxaana adkaatay Aston Villa, waxaana uu ka dhacay garoonka Wembley.
Saddex sano oo ay ka maqnaayeen horyaalka Premier League ayey kooxda Aston Villa dib ugu soo laabtay kaddib markii ay ka faa’iideysteen qalad uu sameeyey goolhayaha kooxda Derby ee Kelle Roos.
Kooxda Derby ayaa guuldarradan ay ku hayd dhabar jab weyn iyadoo xilli ciyaareedka soo socda ka ciyaari doona horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska.
Halyeygii hore ee Chelsea, Frank Lampard oo ah tababaraha haatan ee kooxda Derby ayaa ka qalbi jabay inay kooxdiisu ku guuldarreysatay u soo bixitaanka horyaalka Premier League xilli ciyaareedka dambe.
Lampard waxa uu doonayey in koox xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey uu tababare ka noqdo uu durbadiiba u soo saaro horyaalka heerka koowaad ee Ingiriiska, laakiin taasi ma dhicin maanta, balse waxaa xusid mudan inuu guuleystay John Terry oo tababare ku xigeen ka ah kooxda Aston Villa ee haatan xaqiijisay inay fasal ciyaareedka dambe ka ciyaari doonto Premier League.
Frank Lampard ayaan la ogeyn inuu tababare ka sii ahaan doono kooxda Derby iyadoo ay jirtay in la la xiriirinayey shaada kooxdiisii hore ee Chelea, maadaama loo sheegay inuu bedelo doono macallin Maurizio Sarri marka uu kulanka Final-ka Europa League hoggaamiyo Blues.